Soo dejisan Hamachi 2.2.0.526 – Vessoft
Soo dejisan Hamachi
Hamachi – software aad u fiican si ay u abuuraan network dalwaddii gaarka loo leeyahay internet-ka. software The kuu ogolaanayaa inaad in ay ku xidhmaan kombiyuutarada shabakada dalwaddii wadajirka oo la ilaaliyo oo ay algorithms encryption gaar ah. Hamachi waxaa loo isticmaalaa inuu u ciyaaro kulan dhex mara shabakadda, wadaagi files iyo qabashada hawlaha kale ee LAN ee caadiga ah. Hamachi maamushaa shabakadaha dalwaddii isticmaalaya fudud in ay isticmaalaan web-interface.
Tools for goobaha
maamulka haboon via web interface-
No u baahan tahay qalab dheeraad ah
Hamachi Software la xiriira:
English, Español, 中文, 日本語... Picasa 3.9.141.259